SBS Language | एमसीसी प्रतिनिधि काठमाडौँमा र बजेट भाषणको विरोध: गए ७ दिन नेपालमा
एमसीसी प्रतिनिधि काठमाडौँमा र बजेट भाषणको विरोध: गए ७ दिन नेपालमा
Protests in Kathmandu against the US Millenium Challenge Corporation on 06 September 2021. Source: EPA/NARENDRA SHRESTHA via AAP
एमसीसी की प्रतिनिधि काठमाडौँ पुगेको र बजेट भाषणको विरोध भएको लगायतका गए ७ दिनका नेपालका प्रमुख समाचार यहाँ सुन्नुहोस्।
नेपालमा कोरोनाको कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या करिब ११ हजार पुग्न आटेको छ। यस सँग-सँगै निको हुनेको दर भने ९५ प्रतिशत जति रहेक छ।
हालसम्मको परिक्षण सङ्ख्या पि.सि.आर. मार्फत गरिएकोमा ४० लाख नाघिसकेको छ भने एन्टिजेनद्वारा परिक्षण गरिएकोमा ५ लाख जति रहेका छन्।
यस्तै जम्मा पोजेटिभ केसहरु भने पि.सि.आर. मा ७ लाख र एन्टीजेनमा ८६ हजारको हाराहारीमा रहेको छ।
पछिल्लो विवरणको अनुसार प्रति दिन मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १० देखि १५ सम्म रहेको छ भने २४ घण्टाभित्रको सकृय संक्रमितको सङ्ख्या लगभग २७ हजारसम्म रहेको छ।
अहिले खोप लगाउने प्रकृयाले अलि तिव्रता पाएको छ। यस विषयमा स्वास्थ तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण प्रासद पौडेल भन्छन्, “गत माघदेखि सुरु गरिएको कोभिड-१९ विरुद्धको खोप अभियानको क्रममा हालसम्म कमसेकम एक मात्रा खोप पाउनेहरुको सङ्ख्या ५६ लाख ८३ हजार ६१ जना रहेको छ भने ५० लाख ५३ हजार ८ सय ३ जनाले भने पूर्ण मात्रामा खोप लगाईसकेका छन।”
हाल सातवटै प्रदेशमा एस्ट्रो जेनेका; जोनसोन एण्ड जोनसोन र भेरोसेलको पहिलो र दोस्रो खोप लगाउने कार्यक्रमहरु सम्पन्न भईराखेका छन्।
A woman worships Lord Shiva (Hindu god of creation and destruction) to mark the Teej festival amid the coronavirus pandemic fear in Kathmandu.
बजेट भाषणको विरोध
सरकारले प्रकृया नपुर्‍याई बजेट सम्बन्धी विदधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेपछि विपक्षी दलले त्यसको विरोध गरेको छ।
बजेट सम्बन्धी विधेयकलाई संसदमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा कम्तिमा ५ दिन अगाडी दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, र विपक्षीलाई त्सयमा विचार गर्ने समय दिनुपर्ने हुन्छ। तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १ घण्टाभित्रै संसदमा यो विधेयक प्रस्तुत गरेका छन्।
जेठमा ओली सरकारले ल्याएको बजेट अमान्य भन्दै यस्तो गरिएको हो। त्यसबेला एमालेको सरकारले अद्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको थियो।
शुक्रबार प्रतिपक्षीको विरोध र त्यस कारण उनीहरुको मर्यादापालकहरुसँगको ठेलामठेलले बैठक तनावमय भएको छ र केहि टेबल समेत भाँच्चिएका छन्। वैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमाले सांसद रेखाकुमारी झाले भनिन्, “संसदकोपनि एउटा नियम छ, त्यो पनि मर्यादा राख्नुभएन र पार्टीबाट वहाँहरुले दलिय मर्यादा पनि राख्न सक्नु भएन। दलिय व्यवस्था अनुसार, दलले कारवाही गर्न पाउँछ, अर्थमन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराउनुभयो र यहाँ अनुसासन विहिन काम गर्नुभएको छ।”
सत्तापक्ष र विपक्षीबीच संवाद हुन नसक्ने अवस्थाको कारण आगामी बैठकमा यो बजेट पारित हुने सम्भावना कम दखिन्छ।
एससिसिकी प्रतिनिधि काठमाडौँमा
यस हप्ता अमेररिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको टोली नेपाल आईपुगेका छन्। उनीहरुले गठबन्धनका सबै शिर्ष नेताहरुलाई भेटवार्ता त गरे, तर सबैबाट यस सम्झौताप्रति फरक मत रहेको पाए।
शुक्रबार बालुवाटार निवासमा एमसीसीका प्रतिनिधिहरुसँग भेटवार्ता भईसकेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू यस सम्झौताप्रति सकारात्मक भएको बताएका छन्।
उनले सुमार र उनका सहकर्मीलाई आफुले अन्य दलका नेताहरुलाई यस विषयप्रति सकारात्मक हुन पहल गरिरहेको समेत बताए।
यसै दिन सुमारले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको खुमलटारस्थित निवासमा पुगेर भेटवार्ता गरिन्। एक घण्टाको वार्तामा सुमारले दाहाललाई यस सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको र कुनै सैन्य गठबन्धनसँग आबद्ध नरहेको कुरा गरिन्।
उनले सिंहदरबारमा गएर उर्जामन्त्री पम्फा भुसालसँग पनि भेटेकी थिईन्। यसैगरि नेपाली काङ्ग्रेसद्वारा गठित ‘नेपाल-अमेरिका संसदीय मैत्री समुह’ का सदस्यहरुलाई उनले होटल म्यारियटमा भेटवार्ता गरिन्।
उनले बिहिबार नेपाल आएकै दिन भने नेताद्वय केपी शर्मा ओली; माधवकुमार नेपाल; उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईसँग भेटघाट गरिन्।
Nepal Prime Minister Sher Bahadur Deuba met Fatema Sumar, Vice President of the US Millenium Challenge Corporation (MCC)
Sher Bahadur Deuba, Twitter
तुईन र हेलिकप्टर प्रकरणबारे भारतलाई पत्राचार
नेपाल सरकारले भारतलाई पत्राचार गर्दे करिब १ महिना भन्दा अगाडि दार्चुलामा भएको तुईन प्रकरण र भारतिय हेलिकप्टरको अवैध उडानको बारेमा स्पस्टिकरण मागेको छ।
भारत सिमा सुरक्षा बलले खोला तर्दै गरेको बेला जयसिंह धामीको तुईनको तार फुस्काईदिएर उनी नदीमा खसेर बेपत्ता भएको करिब ५ हप्ता भईसकेको छ।
यसको केहि समय पछि त्यही सिमानाबाट भारतले लगातार केहि दिन नेपाली आकाशमा हेलिकप्टर उडाएको थियो।
नेपालस्थित भारतीय दूतावासमार्फत पठाईएको यस कुटनीतिक पत्रमा दुवै घटनामा भारतको संलग्नता रहेको बताईएको छ। यसको साथ-साथै धामीको परिवारलाई केहि राहत दिन र दोषी पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गर्न समेत यस पत्रमा लेखिएको छ।
यसैगरि आगामी दिनमा अनाधिकृत रुपमा नेपालको सिमानाभित्र हेलिकप्टर नउडाउन पनि आग्रह गरिएको छ।
पशुपतिको जलहरीमा घोटालाको आरोप
अखित्यारले अनुशन्धान आयोगले पशुपतिनाथको जलहरी निर्माणमा भएको ११ केजी सुनको घोटालाको विषयमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ।
करिब १ वर्ष अगाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्न आदेश दिए। त्यसको उद्‍घाटन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गर्न लगाईयो।
त्यस लगत्तै पशुपति विकाश कोशका केहि सद्स्यले जलहरी निर्माणमा अन्य संलग्न व्यक्तिसँग हिसाबकिताब माग्दा नपाएको हुनाले घोटालाको आसङ्का गरियो।
त्यसबेलापनि अख्तियारले अनुसन्धान अगाडी बढाएको थियो तर त्यसको कुनै टुङ्गो लाग्न सकेको थिएन। हाल अख्तियारले पशुपति विकाश कोषका सदस्यसचिवलाई बयान लिएर १२ पाता जतिको कागज पनि भराएको छ।
महिला फुटबल टिमको बङ्गलादेशमाथि विजयी
नेपालको महिला राष्ट्रिय फुटबल टिमले दशरथ रंगशालामा बङ्गलादेशको १ गोलको विरुद्ध २ गोलले हराएको छ।
महिला राष्ट्रिय खेलाडी टोलीको ईतिहासमा ३५ वर्षपछि तीजकै दिन यस्तो अन्तराष्ट्रिय विजय हासिल गरिएको हो। यस खेल फिफाको मापदण्ड अन्तरगत परेको छ।
यो खेल भारतमा हुने एसियन कपको निम्ति छनोटको रुपमा रहेको छ।
बंलादेशले नेपालमा अझै एक मैत्री खेल खेल्न बाँकी छ भने नेपालले अब उज्बेकिस्थानमा फिलिपिन्स र हङकङसँग दुई खेल खेल्नेछ।
नेपालको यस ऐतिहासिक विजयका निम्ति अस्ट्रेलियाका ग्यारी फिलिप्सले राष्ट्रिय महिला टोलीका मुख्य प्रशिक्षकका भुमिका निर्वाह गरेका थिए। अहिलेसम्म विराटनगर, पोखरा र साददोबाटोमा प्रतिस्पर्दा गरिसकेको नेपालको यस महिला टोलीको दशरथ् रंगशालामा यो पहिलो खेल हो।
नेपालमा कोरोनाको कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या करिब ११ हजार पुग्न आटेको छ। यस सँग-सँगै निको हुनेको दर भने ९५ प्रतिशत जति रहेक छ। हालसम्मको परिक्षण सङ्ख्या पि.सि.आर. मार्फत गरिएकोमा ४० लाख नाघिसकेको छ भने एन्टिजेनद्वारा परिक्षण गरिएकोमा ५ लाख जति रहेका छन्। यस्तै जम्मा पोजेटिभ केसहरु भने पि.सि.आर. मा ७ लाख र एन्टीजेनमा ८६ हजारको हाराहारीमा रहेको छ। पछिल्लो विवरणको अनुसार प्रति दिन मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १० देखि १५ सम्म रहेको छ भने २४ घण्टाभित्रको सकृय संक्रमितको सङ्ख्या लगभग २७ हजारसम्म रहेको छ। अहिले खोप लगाउने प्रकृयाले अलि तिव्रता पाएको छ। यस विषयमा स्वास्थ तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण प्रासद पौडेल भन्छन् –
“गत माघदेखि सुरु गरिएको कोभिड-१९ विरुद्धको खोप अभियानको क्रममा हालसम्म कमसेकम एक मात्रा खोप पाउनेहरुको सङ्ख्या ५६ लाख ८३ हजार ६१ जना रहेको छ भने ५० लाख ५३ हजार ८ सय ३ जनाले भने पूर्ण मात्रामा खोप लगाईसकेका छन।”
सरकारले प्रकृया नपुर्‍याई बजेट सम्बन्धी विदधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेपछि विपक्षी दलले त्यसको विरोध गरेको छ। बजेट सम्बन्धी विधेयकलाई संसदमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा कम्तिमा ५ दिन अगाडी दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, र विपक्षीलाई त्सयमा विचार गर्ने समय दिनुपर्ने हुन्छ। तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १ घण्टाभित्रै संसदमा यो विधेयक प्रस्तुत गरेका छन्। जेठमा ओली सरकारले ल्याएको बजेट अमान्य भन्दै यस्तो गरिएको हो। त्यसबेला एमालेको सरकारले अद्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको थियो। शुक्रबार प्रतिपक्षीको विरोध र त्यस कारण उनीहरुको मर्यादापालकहरुसँगको ठेलामठेलले बैठक तनावमय भएको छ र केहि टेबल समेत भाँच्चिएका छन्। वैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमाले सांसद रेखाकुमारी झाले भनिन् –
“संसदकोपनि एउटा नियम छ, त्यो पनि मर्यादा राख्नुभएन र पार्टीबाट वहाँहरुले दलिय मर्यादा पनि राख्न सक्नु भएन। दलिय व्यवस्था अनुसार, दलले कारवाही गर्न पाउँछ, अर्थमन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराउनुभयो र यहाँ अनुसासन विहिन काम गर्नुभएको छ।”
यस हप्ता अमेररिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको टोली नेपाल आईपुगेका छन्। उनीहरुले गठबन्धनका सबै शिर्ष नेताहरुलाई भेटवार्ता त गरे, तर सबैबाट यस सम्झौताप्रति फरक मत रहेको पाए। शुक्रबार बालुवाटार निवासमा एमसीसीका प्रतिनिधिहरुसँग भेटवार्ता भईसकेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू यस सम्झौताप्रति सकारात्मक भएको बताएका छन्। उनले सुमार र उनका सहकर्मीलाई आफुले अन्य दलका नेताहरुलाई यस विषयप्रति सकारात्मक हुन पहल गरिरहेको समेत बताए। यसै दिन सुमारले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको खुमलटारस्थित निवासमा पुगेर भेटवार्ता गरिन्। एक घण्टाको वार्तामा सुमारले दाहाललाई यस सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको र कुनै सैन्य गठबन्धनसँग आबद्ध नरहेको कुरा गरिन्। उनले सिंहदरबारमा गएर उर्जामन्त्री पम्फा भुसालसँग पनि भेटेकी थिईन्। यसैगरि नेपाली काङ्ग्रेसद्वारा गठित ‘नेपाल-अमेरिका संसदीय मैत्री समुह’ का सदस्यहरुलाई उनले होटल म्यारियटमा भेटवार्ता गरिन्। उनले बिहिबार नेपाल आएकै दिन भने नेताद्वय केपी शर्मा ओली; माधवकुमार नेपाल; उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईसँग भेटघाट गरिन्।
नेपाल सरकारले भारतलाई पत्राचार गर्दे करिब १ महिना भन्दा अगाडि दार्चुलामा भएको तुईन प्रकरण र भारतिय हेलिकप्टरको अवैध उडानको बारेमा स्पस्टिकरण मागेको छ। भारत सिमा सुरक्षा बलले खोला तर्दै गरेको बेला जयसिंह धामीको तुईनको तार फुस्काईदिएर उनी नदीमा खसेर बेपत्ता भएको करिब ५ हप्ता भईसकेको छ। यसको केहि समय पछि त्यही सिमानाबाट भारतले लगातार केहि दिन नेपाली आकाशमा हेलिकप्टर उडाएको थियो। नेपालस्थित भारतीय दूतावासमार्फत पठाईएको यस कुटनीतिक पत्रमा दुवै घटनामा भारतको संलग्नता रहेको बताईएको छ। यसको साथ-साथै धामीको परिवारलाई केहि राहत दिन र दोषी पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गर्न समेत यस पत्रमा लेखिएको छ। यसैगरि आगामी दिनमा अनाधिकृत रुपमा नेपालको सिमानाभित्र हेलिकप्टर नउडाउन पनि आग्रह गरिएको छ।
पशुपतिको जलहरीमा घोटाला
अखित्यारले अनुशन्धान आयोगले पशुपतिनाथको जलहरी निर्माणमा भएको ११ केजी सुनको घोटालाको विषयमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। करिब १ वर्ष अगाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्न आदेश दिए। त्यसको उद्‍घाटन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गर्न लगाईयो। त्यस लगत्तै पशुपति विकाश कोशका केहि सद्स्यले जलहरी निर्माणमा अन्य संलग्न व्यक्तिसँग हिसाबकिताब माग्दा नपाएको हुनाले घोटालाको आसङ्का गरियो। त्यसबेलापनि अखित्यारले अनुसन्धान अगाडी बढाएको थियो तर त्यसको कुनै टुङ्गो लाग्न सकेको थिएन। हाल अखित्यारले पशुपति विकाश कोषका सदस्यसचिवलाई बयान लिएर १२ पाता जतिको कागज पनि भराएको छ।
नेपालको महिला राष्ट्रिय फुटबल टिमले दशरथ रंगशालामा बङ्गलादेशको १ गोलको विरुद्ध २ गोलले हराएको छ। महिला राष्ट्रिय खेलाडी टोलीको ईतिहासमा ३५ वर्षपछि तीजकै दिन यस्तो अन्तराष्ट्रिय विजय हासिल गरिएको हो। यस खेल फिफाको मापदण्ड अन्तरगत परेको छ। यो खेल भारतमा हुने एसियन कपको निम्ति छनोटको रुपमा रहेको छ। बंलादेशले नेपालमा अझै एक मैत्री खेल खेल्न बाँकी छ भने नेपालले अब उज्बेकिस्थानमा फिलिपिन्स र हङकङसँग दुई खेल खेल्नेछ। नेपालको यस ऐतिहासिक विजयका निम्ति अस्ट्रेलियाका ग्यारी फिलिप्सले राष्ट्रिय महिला टोलीका मुख्य प्रशिक्षकका भुमिका निर्वाह गरेका थिए। अहिलेसम्म विराटनगर, पोखरा र साददोबाटोमा प्रतिस्पर्दा गरिसकेको नेपालको यस महिला टोलीको दशरथ् रंगशालामा यो पहिलो खेल हो।